မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ပိတ်ကားနောက်ကွယ်က ဘီလူးခေါင်းနဲ့ မင်းသားလေး Kim Hyung Joong
ပိတ်ကားနောက်ကွယ်က ဘီလူးခေါင်းနဲ့ မင်းသားလေး Kim Hyung Joong
Boy Over flower ကားနဲ့ လူသိပိုများလာတဲ့ မင်းသား Kim Hyung Joong တစ်ယောက် သူ့တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူကို ရိုက်နှက် နှိပ်စက်လို့ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးက စခန်းမှာ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားတဲ့ သတင်းကို တွေ့တော့ စိတ်ထဲမယုံချင်သလိုဖြစ်မိပေမဲ့ လူဆိုတာ ရုပ်ချောချော ရုပ်ဆိုးဆိုး မကောင်းမှုဆိုတာလုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးမိပြန်တော့ သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖတ်ပြီး အံ့သြမိတယ်…
၂၀၁၄ သြဂုတ် ၂၂ရက်နေ့ လောက်မှာ သတင်းတွေစတင်ထွက်လာခဲ့တာကတော့….
သူနဲ့ တိတ်တိတ်လေးချစ်သူဖြစ်နေကြတဲ့ ကောင်မလေးက Songpa ရဲစခန်းမှာ သူ့ကို Kim Hyung Joong က ပြီးခဲ့တဲ့ မေလကနေ ဇူလိုင်လလည်လောက်အထိ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက် နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်… ကောင်မလေးက သူနဲ့ ကင်ဟွန်ဂျွန်း ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေတွေနဲ့တကွ သူမ ရိုက်နှက်ခံရစဉ်က ဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုပါ သက်သေအဖြစ် တင်ပြခဲ့ပါတယ်တဲ့…
သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောကြားချက်အရ “သူတို့ ၂ယောက် စကြိုက်တာ ၂၀၁၂ကပေါ့။ မေလမှာ မိန်းမပြဿနာတစ်ခုစဖြစ်ပြီး ကင်ဟွန်ဂျွန်းက သူ့ကို စပြီး ရိုက်နှက် နှိပ်စက်တော့တာပဲ”
ကောင်မလေးဟာ ကင်ဟွန်ဂျွန်းနေထိုင်တဲ့ တိုက်ခန်းမှာ ထိုးခံ၊ ကန်ခံ ခဲ့ရပါတယ်။ သူမ မျက်နှာ၊ ရင်ဘတ်၊ လက်မောင်းနဲ့ တင်ပါးတွေမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံမှာ ၂ပတ် ကျော် ဆေးကုသခံခဲ့ရတယ်လို ဆိုပါတယ်…
ဂျူလိုင်လမှာတော့ သူမရဲ့ နံရိုးတစ်ချောင်းကြိုးခဲ့ပြီး ၆ ပတ်ကြာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်…
ရဲက ကင်ဟွန်ဂျွန်းကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးဖို့ ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်…
(Above news is Translated from: Koreaboo )
သြဂုတ်လ ၂၃ရက်နေမှာတော့ ကင်ဟွန်ဂျွန်းရဲ့ အေးဂျင့်စီ KeyEast ကနေပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုချက်ချင်းထွက်လာပါတယ်…
“ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သေချာတိကျအောင် မေးမြန်းနေရလို့ ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို ထင်ထားတာထက် နောက်ကျပြီးမှ ကြေငြာတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်… ဘာမှ မပြောခင် ကင်ဟွန်ဂျွန်းကို ဂရုစိုက်ကြတဲ့ သူတွေကို တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ ဦးညွန့်ပါတယ်… ကျွန်တော်တို့ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။
သူနဲ့ အသေးစိတ်ကို မေးမြန်းအပြီးမှာ သူတို့ ၂ယောက် သိကျွမ်းခဲ့ကြတာ ၂၀၁၂ ကတည်းကဆိုပေမဲ့ သူတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်တာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်မှပါ… ဒီအတောအတွင်းမှာ သူတို့ ၂ဦးဟာ အပြင်းအထန် စကားများခဲ့ကြပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂လအတွင်းမှာ သူဟာ ကြိမ်ဖန်များစွာ ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ မှားယွင်းတဲ့ စွဲချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ချင်း ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရန်ဖြစ်ကြပေမဲ့ နံရိုးကြိုးတာဟာ ရန်ဖြစ်ရာက ရတဲ့ ဒဏ်ရာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ ရန်မဖြစ်ခင်က သူတို့ ၂ယောက် စရင်းနောက်ရင်း ရတဲ့ ဒဏ်ရာပါ။ အဲဒါဖြစ်ပြီး နောက်နေ့မှာ သူမဟာ သူမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တောင် အပြင်ကို ပုံမှန်ထွက်နေပါသေးတယ်။ သူမ ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတာတောင် သူ သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။” လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်…
KeyEast က သတင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပုံကြီးချဲ့ကားပြီး ရေးနေကြတာကို စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ သူတို့လဲ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကူညီသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်…
နောက်သတင်းတစ်ခုမှာတော့ ကင်ဟွန်ဂျွန်းဟာ အဲဒိနေ့မှာပဲ ဘန်ကောက်ကို သူ့စတိတ်ရှိုး 2014 Kim Hyung Joong World Tour – Fantasy in Bangkok”
(Above news is Translated from : Koreaboo)
သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ ကိုရီးယား Dispatch မဂ္ဂဇင်းက သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ မတ်စေ့ တွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောထားတဲ့ စာတွေကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ အေးဂျင့်ကပြောတော့ ကြိုက်တာ လပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုမိန်းကလေးကပြောတော့ ကြိုက်တာ ၂ နှစ်ရှိပြီတဲ့...
Dispatch က ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ကင်ဟွန်ဂျွန်းနဲ့ သူမကြားက ပြောထားတဲ့ စကားတွေနဲ့ သူမနဲ့ သူမသူငယ်ချင်းကြားပြောထားတဲ့ စကားတွေရဲ့ နေ့စွဲအရ သူတို့ ၂ယောက်ဟာ တကယ်ကိုပဲ ၂နှစ်ကြာ ချစ်ကြိုက်နေကြတာဖြစ်ပြီး သူမ ဒဏ်ရာရတာကိုလဲ ကင်ဟွန်ဂျွန်းဘက်က သိတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(Above pic and news is Referred and translated from: Koreaboo)
အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသား ကင်ဟွန်ဂျွန်းဟာ စက်တင်ဘာ ၂ရက်နေ့မှာ စစ်ဆေးခံဖို့ Songpa ရဲစခန်းကို ည ၉နာရီအချိန်မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရဲစခန်းကို အလာ မီဒီယာရဲ့ မေးခွန်းတွေအစုံနဲ့ မေးခွန်းထုတ်ခံခဲ့ရပြီး သူက မီဒီယာတွေကို “ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီစစ်ဆေးမှုကို ကျွန်တော် ရိုးသားစွာ ဖြေကြားမှာပါ” လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၄နာရီကြာ စစ်ဆေးမှုအတွင်းမှာ ကင်ဟွန်ဂျွန်း ပြောခဲ့တာကတော့
“သူနဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ သူ့ကို ၁ခါ ရိုက်လိုက်ဖူးပေမဲ့ ကျန်တဲ့ စွဲချက်တွေကတော့ အမှားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်” တဲ့။
ရဲတွေက မီဒီယာကိုပေးတဲ့ ကောက်ချက်ကတော့ --
“ကင်ဟွန်ဂျွန်းဟာ စွဲချက် ၄ခုမှာ ၁ချက်ကို ၀င်ခံပြီး ကျန်တာတွေကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ နံရိုးကျိုးတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူတို့တွေ စရင်း နောက်ရင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒိအချိန်က သူတို့တောင် သတိမထားမိလိုက်ပါဘူးလို့ပဲပြောသွားပါတယ်”
ရဲက ဆက်လက်ပြီးပြောကြားတာကတော့ “တရားလိုနဲ့ တရားခံရဲ့ ထွက်ချက်တွေက မညီညာတဲ့အတွက် လိုအပ်လျှင် အဆိုပါ မိန်းကလေးကိုလဲ ထပ်မံခေါ်ဆိုပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
(Above news is Translated from: Allkpop)
နောက်ထပ်ရဲက ပြောကြားတာကတော့ “ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စကို စစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ။ တရားခံဟာ အပြစ်ရှိပါတယ်လို့ သုံးသပ်လို့ မရသေးပါဘူး” လို့ဆိုပါတယ်။
တကယ်လို့ သူဟာ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင် ထောင်ကျနိုင်သလို $10,000 ဒဏ်ငွေဆောင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
(Above news is Translated form : kdramastars)
Kim ကို စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိ Chung က “ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရန်ဖြစ်ကြတာ ၂ဦးစလုံးပါ။ (မိန်းကလေးကလဲ ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘော)။ ဒါပေမဲ့ သူက သူမကို ဘယ်နှကြိမ်ရိုက်မိလဲ ဘယ်ကိုရိုက်မိလဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲက ဒေါသအလျှောက် နောက်တစ်ယောက်ကို ရိုက်နှက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်က အဲဒိထက် ပြင်းထန်ပါတယ်” လို ဆိုပါတယ်။
Chung က ပြစ်မှုဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဆိုရင် Prosecutors တွေဆီကို ပို့သင့်မပို့သင့် မဆုံးဖြတ်ခင် Kim ရော ထိုအမျိုးသမီးရောကို ထပ်မံစစ်ဆေးမည် ဟုဆိုပါတယ်။
ကင်ဟွန်ဂျွန်းဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာစပြီး SS501 အဖွဲ့ဖြင့် နာမည်ကျော်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ “Boy Over Flowers” မှာလဲ (ဒုတိယမင်းသား အဖြစ်) ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ နာမည်ရ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။
(Translated from : 680news )
သူ့ကို အစွဲလန်းကြီး ကြိုက်တဲ့အထဲမပါပေမဲ့ ရုပ်ရည်ချောပြီး သရုပ်ဆောင် မဆိုးတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ခံထားပါတယ်။ သူသာ တကယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သူကြိုးစားခဲ့သမျှနဲ့ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်တော့မှာပေါ့။ ခုတောင် နာမည်ပြန်ရဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်တော့ပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာ မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းပြည့်စုံရင် မင်းသားဖြစ်ထိုက်တယ် အပြင်က သူဘာဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှ မဆိုင်တာဆိုတာ ဟောလိဝုဒ်က မင်းသားမင်းသမီးတွေအတွက် မှန်ရင်မှန်မယ် အာရှက ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သူတို့ အနုပညာသမားတွေကို ပိုပြီး တင်းကျပ်လေ့ရှိပါတယ် (မြန်မာပြည်က ပရိတ်သတ်ကလွဲလို့… :P)။ အဲ့ဒိအတွက်ကြောင့်လဲ သူတို့ကို ပရိတ်သတ်က အချစ်ပိုကြ လက်ဆောင်တွေပို့ကြလုပ်သလို သူတို့ကို အားကျ စံထားနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေ အတုခိုးမှားမှာကိုလဲ စိုးကြတယ်ထင်ပါတယ်။ (it’s complicated) ။
ဒီကိစ္စမှာ စစချင်း သတင်းတွေ့တော့ မီးမရှိပဲ မီးခိုးထွက်မလာဘူး၊ မျက်နှာလေးချောနေ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ကြင်နာတတ်နေပေမဲ့ အပြင်မှာ နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်တတ်သူ ဖြစ်နိုင်တာပဲ ပြီးတော့ သူ့ကို စကာင်္ပူမှာ မြင်ဖူးတုန်းကတည်းက နည်းနည်းကြီးကျယ်တယ် ဆောင့်ကြွားကြွားနိုင်တယ်လို့ ကိုယ်ရော ကိုယ့်အမေရောက သုံးသပ်ခဲ့ကြတာလေ။ မေမေဆို သူ့ကို အစကတည်းက သိတာပဲရှိတော့ အပြင်မှာမြင်ပြီး မကြိုက်တော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က ပြန်တွေးကြည့်တော့လဲ ခုနောက်ပိုင်း မီဒီယာတွေကလဲ သိပ်ယုံရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ (ကိုယ့်နိုင်ငံ သတင်းတွေဖတ်ရင် ကိုယ်တွေ့ဆိုတော့) သေးသေးကို ကြီးကြီး လူစိတ်မ၀င်စား ၀င်စားအောင်လုပ်တတ်ကြသေးတာ။ ပြီးတော့ Kang Ji Hwan တုန်းကလို သူ့ဟာသူ ဖိလစ်ပင်းမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအပြန် ပင်ပန်းလို့ အိပ်နေတာကို သူ့ တိုးဂိုက်အေးဂျင့်ရဲ့ မိန်းမက ဘေးကနေ ဓာတ်ပုံတူတူရိုက်ပြီး သူနဲ့ အိပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးအထင်ခံရအောင် လုပ်သလိုလဲ ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ နောက်ခုတစ်လောမှ Lee Byung Hoon လို စကားပြောတာကို အသံသွင်းပြီး ငွေညှစ်တာမျိုးပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ နာမည်ကြီးဖြစ်ရတာလဲ သူများထက် အနေအထိုင်ဆင်ချင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါသူတို့ရွေးတဲ့လမ်းပဲ ဒါသူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပဲလေ ခါးစည်းခံကြပေါ့လို့ ထင်တယ်။ လူတွေအားလုံးကိုတော့ သူတို့ကလဲ လူပါပဲ သူတို့ကိုလဲ လူလိုဆက်ဆံပါလို့ လိုက်ပြောလို့ဘယ်ရမလဲ။ သူတို့က သာမာန်လူတွေမရတဲ့ အခွင့်ထူးတွေကိုလဲ ခံစားရတယ်လေ။ အပေးအယူပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကင်ဟွန်ဂျွန်းက ၁ခါတော့ရိုက်မိပါတယ်ဝန်ခံကတည်းက ကိုယ်ကတော့ တော်တော် စိတ်ကုန်သွားတယ်။ ရန်ဖြစ်ရင် လက်ပါတာကိုးက မဟုတ်တာ။ ယောကျာင်္ပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ဖြစ်ရင် လက်ပါတာ မကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိန်းမနဲ့ ယောကျာင်္းဖြစ်ကြပြီဆို ယောကျာင်္းလက်ပါရင်ပို ကြည့်မရဘူး။ ဒီမှာပြောစရာဖြစ်လာတယ်။ “ဟင်… တန်းတူအခွင့်အရေးဆို? မိန်းမက လက်ပါတာ ရတယ်။ ယောကျာင်္းလက်ပါတာကျ မရဘူး ဟုတ်လား” လို့ပြောချင်ကြမယ်။ ဟုတ်တယ် ယောကျာင်္းနဲ့ မိန်းမ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသင့်တယ်လို့ ယုံကြည့်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိန်းမကို နှိမ်ချပြီးသုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးမျိုး “မိန်းမဖြစ်ပြီး” တို့၊ “မိန်းမလို မိန်းမရ” စတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးတွေကို ငယ်ငယ်က သုံးရင် သုံးဖူးမယ် ခုနောက်ပိုင်း နားလည်လာတော့ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေကို နှိမ်ချဆက်ဆံတာလို့ ယူဆလို့ ကျွန်မကလဲ မွေးလာကတည်းက ဘ၀ကပေးတဲ့အတိုင်း အမျိုးသမီးမို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က မသုံးသင့်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ ခိုင်းနှိုင်းမှုလို့ထင်လို့ နောက်ပိုင်း မသုံးဘူး။
ဒါဆိုရင် ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါ ယောကျာင်္းတွေ လက်ပါသင့်ဘူးဆိုတာက သဘာဝအားဖြင့် ယောကျာင်္းတွေဟာ မိန်းမတွေထက် အားကြီးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက် ကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ယောကျာင်္းခွန်အားနဲ့ ဟန့်တားလို့ရတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ အားကို မိန်းမတစ်ယောက်က မယှဉ်နှိုင်ဘူး။ အဲ့ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အမျိုးသမီးတွေကို မနှိမ်ချသင့်သလို အနှိုင်မယူသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ယူချင်လဲယူပေါ့ “ဒါဟာ ယောကျာင်္းမပီသဘူး” လို့ မသုံးနှုန်းဘူး “ဒါဟာ လူမဆန်ဘူး။ အားနည်းသူကို အနိုင်ကျင့်လိုစိတ်ရှိတယ်။” လို့ပဲ သုံးနှုန်းရင် ပိုမှန်မယ်။ ဒီလိုလူမျိုးက မိန်းကလေးကိုမှ မဟုတ်ဘူး သူ့ထက်အားနည်းတဲ့ လူတိုင်းကို အနိုင်ကျင့်မှာပဲလေ။ ဒါဟာ ယောကျာင်္းမိန်းမနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။
ကဲပါလေ… ကင်ဟွန်ဂျွန်းကိစ္စကနေ ယောကျာင်္း၊ မိန်းမ အခွင့်အရေးကိစ္စကို ရွေ့သွားပြန်ပြီ။ (အဲ့ဒါပဲ မဗေဒါ စာက လေကြောရှည်တယ်ဆိုတာ… သည်းခံပါရှင်) ဘာဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းသားကတော့ မင်းသား အနေနဲ့ ဆက်လက် ရပ်တည်ဖို့တောင် တော်တော်ခက်ခဲသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ပရိတ်သတ်တစ်ချို့ကလဲ အစကတော့ သူ့ဘက်က ယုံကြည်တယ်တို့ ဘာတို့ပြောနေကြပြီး နောက် သူက၁ခါလုပ်တာဝန်ခံတော့လဲ အနုပညာတွေ နှမြောစရာမို့ နားလည်ခွင့်လွှတ်နေသေးကြတဲ့ အမာခံတွေလဲရှိပါသေးတယ်။ (ကျွန်မလဲ အနုပညာတော့ နှမြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စမရှိပါဘူး ငါဘာလုပ်လုပ် ပရိတ်သတ်က လက်ခံပါတယ်။ လူတွေက ချစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးဖြစ်သွားမှာတော့ မလိုလားဘူး)။ ယိုးဒယား ပရိတ်သတ်တွေကဆို ကင်ဟွန်ဂျွန်းဘက်က အားပေးနေတုန်းဆိုတာ သတင်းထဲတောင် ပါပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စမှာ ကင်ဟွန်ဂျွန်းတစ်ယောက်ထဲရဲ့ အမှားချည်းပဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ လက်ခုတ်ဆိုတာ ၂ဘက်တီးမှ မြည်တာလေ။ ဒီလို နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသားကို ရည်းစားတော်မိရင် အနည်းနဲ့အများတော့ သည်းခံရမယ်။ သ၀န်တိုလို့မရဘူး။ ဖောက်ပြန်ဖို့ အခွင့်အလန်းကလဲ များတယ်။ သူက ဖောက်ပြန်သွားလဲ ခံရမှာပဲ။ (ဒါကတော့ မင်းသားမှ မဟုတ်ဘူး ဘယ်စုံတွဲမဆိုပဲ။ ကိုယ့်မချစ်တော့ဘူးဆိုလဲ ဘာတတ်နိုင်မလဲ)။ Relationship တစ်ခုမှာ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ဖို့ပဲ။ Self-confidence ရှိပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုချစ်ဖို့ပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုတာမှာ အတ္တကြီးပြီး “သူဟာ ငါ့ဟာ ငါလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်မယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ပဲ။ သူလဲ သူ့လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့သူ အတိုင်းတာ တစ်ခုထိပေး။ သူမရှိလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရပ်တည်တတ်တဲ့ စိတ်ကို မွေး။ သူက ကိုယ့်ရည်းစားဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ သူက အပျော်အပါး အပေါင်းအသင်းကြိုက်တယ်၊ အလုပ်ကို ဦးစားပေးတယ်၊ ဂိမ်းမက်တယ်၊ စတာတွေကို အစကတည်းက လက်ခံနိုင်ရင် ကြိုက်။ မကြိုက်တာရှိရင်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကြည့်။ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူက ကိုယ်စိတ်ညစ်တယ်၊ ကိုယ်မကြိုက်ဘူးဆို သူ့ဟာသူ ပြင်လာလိမ့်မယ်။ သွားပြင်ခိုင်းလို့မရဘူး။ မပြင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ သူလုပ်နေတာတွေလောက် ကိုယ့်ကို မချစ်လို့ပဲ။ နောက်ထပ် ရွေးစရာ ၂ခုရှိမယ်။ ကိုယ်သည်းခံနိုင်မလား။ ခံနိုင်ရင် သူ့အဲ့ဒိအကျင့်ကို လက်ခံပြီး ဆက်ချစ်။ လက်မခံနိုင်ရင်တော့ Say Goodbye ပေါ့။
ပြောရင်းနဲ့ Relationship အကြံပေးဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ ဒါနဲ့ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုလုပ်တဲ့သူတွေက သူတို့လုပ်ပြီးရင်လဲ တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးတတ်ဘူးဆိုတာ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတွေ့ဖူးတယ်။ ခု ကင်ဟွန်ဂျွန်းရဲ့ မတ်စေ့တွေကို ဖတ်ရတော့ သူ့ရဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူက အဲဒါနဲ့ ကိုက်တယ်။ သူလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ပြီးမှ “ကိုယ်ဘာလို့ လုပ်လိုက်မိမှန်းမသိဘူးကွာ။ သိပ်လွမ်းတာပဲ။ ကိုယ့်ကို မပြစ်သွားပါနဲ့” စသည်ဖြင့် ကူလီကူမာလုပ်တတ်ကြတယ်။ သူတို့က စိတ်ရောဂါလို့တောင် ပြောရမလိုပဲ။ သူတို့လုပ်ပြီးလဲ သူတို့ကို စွန့်ခွာထားခံရမှာကြောက်ကြတယ်။ အဲလိုလူမျိုးတွေက အမှန်တော့ ကိုယ်နဲ့အရမ်းမပတ်သတ်ခင် မြန်မြန်ခွာတာကောင်းတယ်။ နောက်မို့ဆို လူသတ်တဲ့အထိတောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာ။ မဗေဒါအရင်က ရေးဖူးတဲ့ “Last Friend” ဂျပန်ကားလိုပေါ့။ ချစ်တာ မဟုတ်တော့ဘူး ရူးသွပ်စွာစွဲလန်းခြင်း (Obsessed) ဖြစ်သွားတာ။
အဲဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အမေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့ အရင်အိမ်ထောင်က ကလေးတွေကို ပထွေးက နှိပ်စက်တယ်။ သူ့အမေကိုလဲ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တယ် (ဥပမာ ခုပြနေတဲ့ It’s okay, It’s love) ကားထဲကလိုပေါ့။ အဲလိုမျိုးတွေတွေ့ရင် အမေလုပ်တဲ့ သူကို မဗေဒါက အပြစ်တင်မိတယ်။ သူ့ဟာသူ တစ်ပင်လဲလို တစ်ပင်ပဲထူထူ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စကြောင့် ကိုယ့်ကို မှီခိုနေတဲ့ သားသမီးတွေပါ ဒုက္ခရောက်တယ်။ ရှာကြွေးနေလို့။ ဒီလူဟာ ကိုယ့်မိသားစုရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်နေလို့ဆိုတစ်မျိုး (ဒါတောင် ဒီလူရှာမကြွေးလဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာမစားတတ်ဘူးဆိုတာကိုးက မဟုတ်သေးတာ)။ အိမ်ထောင်ထပ်ပြုတယ်ဆိုတာ ချစ်လို့လဲပါချင်ပါမယ်။ အားကိုးရှာချင်တာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ချစ်လို့ယူတယ်ဆို ဒီလူက ကိုယ့်ကို ရိုက်နှက်နေပါတယ်ဆိုမှ ချစ်သေးလို့ရသလား။ ဒီလူကရော ကိုယ့်ကိုချစ်လို့လား။ အားကိုးရှာချင်တယ်ဆိုရအောင်လဲ အားမကိုးရတဲ့အပြင် တစ်ပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်။ ကိုယ့်ကို ရပ်တည်နေရင်တောင် ပိုက်ဆံရှာရတဲ့ အပူပဲရှိမယ်။ ခုတော့ ကိုယ်လဲရိုက်ခံရ။ ကိုယ့်သားသမီးလဲ ရိုက်ခံရ။ It’s okay, It’s love မှာဆို ရူးတောင်နေတာ (သနားပါတယ် နာ့ Jo In Sung လေး… အာ့လာပြောတာ)…
ရောက်သွားပြန်ပြီ တလွဲ… မဗေဒါကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်အတွေးတွေကို ပုံကြီးချဲ့ ရောက်တတ်ရာရာတွေးဖြစ်တာပါ။
ဒါနဲ့ စာဖတ်သူရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။ တကယ်လို့ ကင်ဟွန်ဂျွန်းပြောသလို ၁ခါပဲရိုက်တာပါဆိုရင်တောင် သူ့ကို မင်းသားအဖြစ် လက်ခံနိုင်မလား? (သူ့အနုပညာ အရည်အချင်းကတော့ နှမြောစရာကိုး) ဒါပေမဲ့လဲ ခုလို အပြင်မှာ ရုပ်လေး နုပြီးချောတဲ့သူက အကြမ်းဖက်တတ်တယ်ဆိုတာကြီးသိထားတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မင်းသမီးတွေကို ကြင်နာသနား တန်ဖိုးထား သဘောကောင်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကိုကြည့်ရင် လက်ခံနိုင်ပါ့မလား (ဒါတွေ မသိခဲ့ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့)... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနုပညာလမ်းကို ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူယခင်ထက် ၁၀ဆတိုးပြီး ကြိုးစားရတော့မယ်။
ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေပြောသွားအုံး… မဗေဒါရဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စာဖတ်သူကရော ဘယ်လိုထင်သလဲ မဗေဒါလိုပဲ လေရှည်ရှည်နဲ့ ဖလှယ်သွားကြနော်…
ကွန်မန့်မှာ မြန်မာလိုရိုက်ရင် စာလုံးအမှားကြီးတွေဖြစ်နေတာ သိတယ်… ဒါပေမဲ့ မလုပ်တတ်ဘူး… ဒါပေမဲ့ မန့်ချင်တဲ့သူအတွက်ကတော့ Force နေစရာမလိုပါဘူးနော်… မဗေဒါစာကို တကယ်ကြိုက်တယ် (မဗေဒါလေးကို ချစ်ကြတယ်) ဆိုရင် မြန်ဂလိပ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft word မှာစာရိုက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရေးပေးသွားကြမှာပဲလေ… ကွန်မန့်မရှိလဲ ကိုယ့်ဘလော့လေးကို ဆက်ရပ်တည်နေနိုင်အောင် ခွန်အားတွေ မွေးနေပါတယ်လေ….
Posted by mabaydar at 5:30 PM
Labels: Celebrities , မင်းသား
9/04/2014 5:57 PM
I never like domestic abuse, but sometimes I want to blame the girls for not reporting to the police sooner. When the BOF craziness entered Myanmar, I also listened to SS501 and watch his performances, but I was disappointed with Playful Kiss. I only started liking him again after he changed his image and released his solo albums. Now I don't want to listen to them anymore.
9/04/2014 6:01 PM
အဲ့ မင်းသားကို အစထဲက သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အရမ်းချောလွန်းလို့။ :D
9/04/2014 6:04 PM
kim hyun joong koasa ka tal ka ma kyite bu... kyi ma ya loe... hehe... ko myat si htal mhar kha na kyi yin yote chaw pae mae thay char kyi yin yote kyann loe... akhu lo lat par tal so tot.. twar p... sa lan pal... :(
9/04/2014 10:14 PM
I love your sense of perspective toaproblem :-)
9/04/2014 10:25 PM
လက်ပါတာတော့တကယ်မကောင်းဘူး ။ သူ့ကိုချောချောလေးမို့ ကြင်နာတတ်မယ်မှတ်တာ...မင်ဟိုအိုပါးပဲကောင်းပါတယ်လေ :P
9/05/2014 11:46 AM
မြတ်ကတော့ သူ့ကို Boys over Flowers ထဲမှာလို နူးနူးညံ့ညံ့လေးနေတတ်တဲ့သူလို့ ထင်ထားတာ
ဒါပေမဲ့ သူ ၁ ခါပဲ ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ ဟိုဘက်မိန်းကလေးကလည်း သူစိတ်တိုဒေါသဖြစ်အောင် ဘာတွေ ပြောလဲ မသိဘူးလေ
မင်းသားဖြစ်ပေမယ့် သူလည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကို ထိပါးလာတဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူကိုတော့ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်
ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ဘက်ကကြည့်ရင် ဒေါသဖြစ်တိုင်း လက်ပါတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို တော့ မကြိုက်ဘူး
သူရှေ့ဆက်ရမယ့် အနုပညာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် မြတ်ကတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသမီးအပေါ် ကြင်နာသနားနေတဲ့ အခန်းပေါ်မှာတော့ မယုံနိုင်တော့ဘူး
အစ်မဗေဒါ က အမြင်လေး ရေးခဲ့ဆိုလို့
ရေးတာ ရှည်သွားလား မသိ :)
9/05/2014 12:27 PM
ပုထုဇဉ်တွေဆုိုတော့လဲ တုတ်ပြက်ဓါးတပြက် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ သူကအနုပညာသည် သူကကျောင်းဆရာ သူကဆရာဝန်။ အဲဒီလုို လေဘယ်တပ်ထားပေမဲ့ သာမန်လူသားဟာ သာမန်လူသားပါဘဲ။ အမှားမကင်းနုိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုယ်လက်နာကျင်စေအောင်ပြုလုပ်တာကိုတော့ လက်ခံလုို့မရပါဘူး။ မရပေမဲ့ ရှိနေကြဦးမှာပါ။
အချစ်လွန်ပြီး သံသယလွန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာလဲ အခုလုို စိတ်မထိန်းလုိုက်နုိုင်တာတွေ ရှိနုိုင်ပါတယ်။
အခုဟာက အချိ်န်မီပါသေးတယ်။ သမီးရည်းစားဘ၀မှာ အခုလုို ဖြစ်ကြတာဆုိုတော့။ မကြိုက်ရင် အေးဆေးလမ်းခွဲလုို့ အလွယ်လေးမဟုတ်လား။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေရပြီးခါမှ အခုလုို ဗီဇတွေပေါ်လာရင် သွားပြီ။
အနုပညာသည်တစ်ယောက်ကို ပရိသတ်တွေ အမြင်နဲ့ဆုိုရင်တော့ ထင်မြင်ချက်တွေ အမျိုးမျိုး ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ လူဆုိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တုိုင် မခံစားရသေးသရွေ့တော့ အေးဆေးဘဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ဒီမင်းသား နာမည်တဟုန်ထုိုး ကျသွားလိမ့်မယ်လုို့တော့ မထင်ပါဘူး။ အားပေးနေမြဲ အားပေးနေကြဦးမှာပါ။
ဘောလုံးလောကက မာရာဒိုနာ။ လက်ဝှေ့လောကက မုိုက်တုိုင်စန်။ သူတုို့ အရမ်းဆုိုးခဲ့ကြပေမဲ့ သူတုို့ပရိသတ်တွေကတော့ ကမ္ဘာအ၀ှမ်း ယခုထက်ထိ ရှိနေဆဲ ရှိနေမြဲပါဘဲ။
အားကစားချစ်သူက အားကစားကိုဘဲ ကြည့်ပြီး ချစ်တတ်ကြတယ်။
ဒီလုိုပါဘဲ အနုပညာချစ်သူတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ခင်မင်သူတွေကတော့ အဲဒီကိုရီးယားမင်းသားလေးကို ဆက်လက်အားပေးနေကြဦးမယ်လုို့ဘဲ မြင်မိပါတယ် ဒေါ်ဗေဒါ။း)
9/06/2014 3:08 AM
ဆက်လက်ပြီး ရေးသားနုိုင်စေဖုို့ BPP Challenge လေး လုပ်ထားတယ်နော်။ အားရင် ထပ်ရေးဦး မဗေဒါ။း)
9/07/2014 6:19 AM
အသေးစိတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖတ်ခွင့်ရအောင် ရေးသားမျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မဗေဒါရေ.. လင့်ခ်အသစ်ထပ်ချိတ်ခွင့်ရလို့ ပျော်နေမိ။ အမြဲဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
9/09/2014 10:52 AM
Zwel Lwin said...
Now, his image is quite destroyed internationally. Have you watched Angel's eyes played by Jennifer Lopez? Her dad nevee hurt her but beat her mom frequently so she called for help and sent him to jail. When her dad was released,he never talked to her again. Other family members also treated her likeatraitor. Her elder brother who usually protected their mom and got beaten by dad during the fight also accused her of being so harsh on their dad. Strangely, he followed the same path and started beating his wife.
9/09/2014 11:15 PM